Wasiir Dubba oo u Jawaabay Dowlada Kenya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wasiir Dubba oo u Jawaabay Dowlada Kenya
Wasiir Dubba oo u Jawaabay Dowlada Kenya
Xukuumada Soomaaliya ayaa sheegtay inay fajaciso ku noqotay go’aankii ay dhawaan dowladda Kenya wakhtiga kooban ugu qabatay hay’adda UNHCR ee ahaa in la xiro xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma oo oo ay ku nool yihhiin kumanaan Soomaali ah.
Wasiirka Warfaafinta ee Soomaaliya, Cismaan Abokor Dubbe ayaa sheegay in Kenya ay isku khaldayso arrimaha siyaasadda iyo kuwa bini’aadanimada, isagoo intaa ku daray in dadka qaxootiga ah ay ku joogaan Kenya sharci caalami ah oo mudan in la ilaaliyo.
“Arrimaha siyaasadda waxay ka dhaxeeyaan labada dal, kiis baa maxkamadda yaalla oo weli go’aan laga gaarin, arrimhii Jabhadaha baan hadda xalkoodii helnay, Marka haddii lagaaga adkaaday siyaasadda ma ahan inaad ka aar-goosato dadka qaxootiga ah.” ayuu yiri wasiir Dubbe.
Waxaa uu intaas ku daray in Kenya aysan qasab ku celin karin Qaxootiga dalkeeda sida ay qabaan shuruucda caalamiga ah.
“Qaxootiga waxa uu ku fadhiyaa xeerka caalimaga ah ee qaxootiga ee loo yaqaan Geneva Convention marka sidaasi darteed Kenya xaq uma lahan inay si khasab ah ku celiso qaxootiga.” ayuu intaas ku daray wasiirka.
Previous articleBaarlamaanka Is.iidamin Siyaasad buu wadaa isagaana
Next articleShirkii Shanta Maamul Goboleyd oo ka furmay xarunta Xalane
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay guddi soo baara cabashada waalidiinta Soomaaliyeed ee wiilashoodii tababarka loogu qaaday dalka Eritrea, kuwaas oo...
Muqdisho la soo gaarsiinayo maanta qaar ka mid ah dhaawacyadii ciyaartoyda...